NOVENA KWIVIRGEN DEL CARMEN YONKE IMIHLA
Funda eli nqaku, ukuze wazi imithandazo ukuba ufuna ukwenza novena kwiNtombikazi yaseCarmen; nokuba uhlawule irhafu, umbulele kunye / okanye wenze isicelo.
1 Novena kwiNtombikazi yaseCarmen
1.1 Imithandazo yeNovena
1.1.1 Umthetho wesivumelwano
1.1.2 Umthandazo wokuvula
1.1.3 Umthandazo wokugqibela
1.2 Umthandazo "Dumisa uMariya" emva kokwenza umthandazo wokuvula
1.3 Umthandazo "Bhotani Queen" emva kokwenza imithandazo yemihla ngemihla ehambelana nayo
1.4 Imithandazo yemihla ngemihla yeNovena eya kwiVirgen del Carmen
Novena kwiNtombikazi yaseCarmen
Ukwenza iNovena, kuya kufuneka wenze imithandazo esiza kukuxelela yona ngezantsi. Kuya kubakho imithandazo emi-3 ekufuneka uyenzile ngeentsuku ezisithoba; Ukongeza, kukho eminye imithandazo eli-9 oya kuyenza yonke imihla, kunye naleyo sele ikhankanyiwe.
Uya kuhlala uyenza kwiintsuku ezili-9 ngaphambi komnyhadala weVirgen del Carmen, ongowe-16 kaJulayi. Ke ngoko, ukusuka nge-7 yenyanga leyo kunye neentsuku ezisithoba kamva, ngoJulayi 15 ngokukodwa, kufuneka uqale wenze le novena.
Xa uqala nge novena kwiNtombikazi yaseCarmen, Uya kwenza la manyathelo alandelayo esiza kukuxelela wona ngezantsi:
Uqala ngokuthandaza "Umthetho woLungiso."
Emva koko qhubeka "noMthandazo wokuvula."
Kumthandazo ngamnye "wokuvula" ngamnye, uya kuthandaza u "Yibonge uMariya" amaxesha amathathu.
Wenza umthandazo ohambelana nomhla okuwo, uphela ngoKumkanikazi weSichotho.
Emva koko uya kubuza, ubulele kunye / okanye udumise; kuba ucinga ukuba kufanelekile.
Kwaye sigqiba ngo "Mthandazo wokugqibela."
Okulandelayo, siya kukuxelela imithandazo emi-3 ekufuneka uyenze yonke imihla; ngaphandle komhla wenovena okuyo. Zezi:
"Thixo wam neNkosi yam, qubuda phambi koKumkani" "Nkosi enguMongami, nangobomi bam bonke, ngawo wonke umphefumlo wam nangomphefumlo wam wonke ndiyakuthanda, ndiyavuma, ndiya kukusikelela, ndikudumise, ndikuzukise.
“Ndiyakuvuma ngoThixo wam neNkosi yam; Ndiyakholelwa kuwe, ndiyathemba kuwe kwaye ndithembele kuwe ”.
"Kuya kufuneka undixolele iziphoso zam kwaye unike ubabalo kunye nokunyamezela kwakho, kunye nozuko olubanike abo banyamezelayo kuthando lwakho."
“Ndikuthanda ngaphezu kwazo zonke izinto. Kuwe ndiyavuma ukungabi nambulelo kakhulu nazo zonke iimpazamo kunye nezono zam, ngazo zonke izinto endizisolayo ngazo kwaye ndiyakucela ukuba undixolele ngobubele ”.
Ndiyakuva, Thixo wam, kuba ndikonile, ngenxa yokuba unguye.
"Ndiphakamisa ngokuqinisekileyo, ndincedile ngobabalo lwakho olungcwele, ungaze uphinde wone, urhoxe kumatyala okona, ukuvuma izono, ukwanelisa iziphoso zam nokuzama kuyo yonke into ukukukhonza nokukukholisa."
"Ndixolele, Nkosi, ukuze ngomphefumlo ococekileyo nococekileyo ndiyidumise iNtombi eyiNtombikazi, uMama wakho noMama wam, kwaye ndifikelele ngokuncenga kwakhe ngamandla inceba ekhethekileyo endiyicelayo kule Novena, ukuba ngaba kukuzukiswa kwakho nozuko olukhulu, kwaye uzuze ngomphefumlo wam ”.
"Owu Ntombikazi enguMariya, uMama kaThixo noMama kananjalo waboni, noMkhuseli okhethekileyo wabo banxibe iScapular sakho esingcwele."
"Yenzelwa ntoni ubungangamsha bobuThixo, wakhetha ukuba ubenguMama wakhe oyinyaniso."
"Ndiyakubongoza, ndiphe kuNyana wakho oyintanda uxolelo lwezono zam, isilungiso sobomi bam, usindiso lomphefumlo wam, isilungiso seentswelo zam, induduzo yeengxaki zam kunye nobabalo olukhethekileyo endilucelayo kule Novena."
"Ukuba ifanele imbeko nozuko lwakhe, kunye nokulunga komphefumlo wam."
"Ukuze mna, Nenekazi, ukufezekisa oko ndisebenzisa ukulamla kwakho okunamandla, kwaye ndingathanda ukuba nomoya wazo zonke iingelosi, abangcwele kwaye ndenze ngokufanelekileyo ukuze ndikwazi ukukudumisa ngesidima"
"Kwaye ngokudibanisa amazwi am nothando lwabo, ndikubulisa kaliwaka, ndisithi".
Ukuba ulifumene eli nqaku linomdla, siyakumema ukuba ufunde iposti yethu malunga: Umthandazo kwiNtombi yaseCarmen.
"Oyintombi eNgcwele kaCarmen".
"Ndinqwenela ukuba bonke ngaphandle kokuzikhethela bazimele phantsi komthunzi okhuselayo weScapular sakho esingcwele."
"Ngamana bonke bangamanyaniswa naWe, Mama, ngokusondelelana nothando lwale Insignia yakho oyithandayo."
“Owu ubuhle beKarmele! Sijonge siqubude ngentlonelo phambi komfanekiso wakho ongcwele, kwaye usinike ukhuseleko lwakho lothando.
"Ndicebisa iimfuno zikaBawo wethu oyiNgcwele, uPopu, kunye nezo zeCawa yamaKatolika, uMama wethu, kunye nabo bohlanga lwam kunye nabo bonke el mundo, eyam nelezalamane nabahlobo bam ”.
"Jonga ngamehlo onovelwano kuboni abaninzi abahluphekileyo, ubuqhetseba kunye nokuchasana, indlela abamcaphukisa ngayo uNyana wakho ongcwele kunye nabantu abaninzi abangakholwayo indlela abancwina ngayo ebumnyameni bobuhedeni."
"Yanga bonke bangaguquka bakuthande, mama wam, njengoko ndinqwenela ukukuthanda ngoku nangonaphakade."
Umthandazo "Dumisa uMariya" emva kokwenza umthandazo wokuvula
"UThixo akusindise, Maria."
"Phakathi kwabo bonke abafazi."
"Kwaye sisikelelekile isiqhamo sesizalo sakho, Yesu."
"UMariya oyiNgcwele, umama kaThixo".
"Sithandazeleni thina boni".
"Ngoku nangeyure yokufa kwethu".
Umthandazo "Bhotani Queen" emva kokwenza imithandazo yemihla ngemihla ehambelana nayo
"UThixo akusindise, ukumkanikazi kunye noMama wenceba."
"Ubomi bethu, ubumnandi kunye nethemba, uThixo akusindise."
"Sikubiza ngokuba ngoonyana bakaEva abagxothiweyo."
"Kuwe siyancwina, sigcuma kwaye silila kule ntlambo yeinyembezi."
“Yabona ke, Nenekazi, ummeli wethu, buyela kuthi loo mehlo akho anenceba; emveni kokugxothwa kwethu usibonise uYesu, isiqhamo esisikelelekileyo sesizalo sakho ”.
"Owu unobabalo, owoyik 'uThixo, oh uMariya oyiNtombi entle."
"Sithandazele, Mama Ongcwele kaThixo."
"Ukuze sikufanelekele ukufikelela kwizithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu."
Imithandazo yemihla ngemihla yeNovena eya kwiVirgen del Carmen
Ngokubhekisele kwimithandazo yemihla ngemihla ekufuneka yenziwe novena kwiVirgen del Carmen, Iya kuxhomekeka kakhulu kwilizwe okulo; ke akukho "mgangatho uthandazwayo", njengoko kunjalo kwimithandazo yangaphambili esiyibeke kwinqaku.
Ngokubhekisele kwimithandazo ekufuneka yenziwe, eza emva kwemithandazo yemihla ngemihla kunye no "Ndlovukazi Yokubonga"; Inokuba kude njengoko ufuna kwaye ubuze into oyifunayo kwaye uyinqwenela kakhulu. Khumbula ukuba ayisiyonto yomlingo eya kuthi izalisekise ngokupheleleyo izicelo zakho, kodwa iya kukunceda ukuba unxibelelane ngakumbi neNtombikazi, ukuze ikuncede, phambi koThixo kwaye yomeleze unxibelelwano lwakho noMoya oyiNgcwele.
Kufuneka uthandaze ngokholo olukhulu, kuba yeyona nto ibalulekileyo. Siza kukushiya ividiyo ehambelana nosuku lokuqala lwenovena; Ukukunika umbono, ukuba unomdla, uya kuba nakho ukubona uthotho lweevidiyo, nganye inikezelwe kwiintsuku zeli siko lamaKatolika.